त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ यसरी गरे कांग्रेसमा अन्तर्घात - Everest Dainik - News from Nepal
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ यसरी गरे कांग्रेसमा अन्तर्घात
स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात गरेको आरोपमा उपकुलपति खनियाँसँग स्पष्टीकरण लिने कांग्रेसको निर्णय –
स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध घात गर्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताको सूचीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ पनि परेका छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँले चितवनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको थियो । कांग्रेसको अनुशासन समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि डा. खनियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
रमेश रिजाल नेतृत्वको अनुशासन समितिले प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्दै अन्तर्घात आरोपीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ का स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेका दुई सय ५० जनामाथि समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अरू धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ता पेसेवर राजनीतिकर्मी भए पनि खनियाँ देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी प्राज्ञ हुन् । तर, उनीसमेत राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका छन् र अझ पार्टीको अनुशासन नमानेको भनेर कठघरामा परेका छन् ।
स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि अनुशासन समितिले थप अनुसन्धान गरेर दोषी रहेको भए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउन सक्रिय रहेको भनी परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन अघि बढाएका हौँ, आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन सप्रमाण भेटिएपछि अनुशासन कारबाही हुन्छ,’ समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रमाण पुगेमा निलम्बन र निष्कासनसम्मका कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ समिति बैठकले समितिको सचिव पदमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव केशव रिजाललाई नियुक्त गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाउन माग
‘पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन केन्द्रीय कार्यालयमा दुई सय ५० जनामाथि उजुरी परेको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘जिल्ला सभापति, सांसद, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमाथि परेका अन्तर्घात आरोपका उजुरीपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।’
जसका विरुद्ध उजुरी परेको हो, उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सात दिने लाग्ने भएको छ । उजुरी हेरेर पहिले जिल्ला सभापति, सांसदसहितका उच्च नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी समितिले गरेको छ । ‘फाइल हेरेर स्पष्टीकरण सोध्न अझै एक साता लाग्छ,’ समिति सचिव केशव रिजालले भने, ‘पहिले जिल्ला सभापति, सांसद, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसहितका उच्च नेतालाई सोध्छौँ । उहाँहरूले पत्र प्राप्त गरेपछि सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पठाइसक्नुपर्ने छ ।’
याे पनि पढ्नुस विधान अनुमोदन गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
कांग्रेसले २ असोजमा प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि अनुशासनको कारबाही अघि बढाएको सन्देश दिन खोजे पनि स्पष्टीकरण सोध्ने वेलासम्म निर्वाचन भइसक्ने देखिएको छ । कारबाही हुन सक्ने सन्देश दिन निर्वाचनको मुखमा प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रक्रियामा जानै ढिलाइ हुने देखिएको हो ।
हुलाकबाट स्पष्टीकरण पठाइने
उजुरी परेकामाथि समितिले हुलाकमार्फत स्पष्टीकरणको पत्र पठाउने भएको छ । यसअघि पनि हुलाकबाटै पठाइएकाले फेरि पनि त्यसरी नै सोधिने जानकारी रिजालले दिए ।
-कांग्रेसमा अन्तर्घात गर्नेको सूचीमा बहालवाला जिल्ला सभापति, सांसद, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसम्म छन् । अनुशासन समितिको पहिलो बैठकले उनीहरूसहित सबैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नेमाथि उजुरी दिन १० असोजसम्मको समय पनि दिएको छ ।
-अहिलेसम्म छानबिन अघि बढाइएकोमा डडेल्धुरा जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल, नुवाकोट जिल्ला सभापति एवं सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसी, दैलेख जिल्ला सभापति कृष्ण बिसी, जुम्लाका सांसद ललितजंग शाही, जुम्लाका सभापति जितबहादुर शाही, रुकुमकी सांसद मिठु मल्ल छन् । उनीहरूमाथि जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका कांग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउन सक्रिय भएर लागेको उजुरी परेको हो ।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसका सांसदहरुको बैठक आज बस्दै
-सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा सभापति कर्णविरुद्ध अमरगढी नगरपालिकामा कांग्रेसलाई हराउन लागेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै, नुवाकोटका सभापति केसीविरुद्ध विदुर नगरपालिकामा कांग्रेसलाई हराउन सक्रिय रहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
-पूर्वकेन्द्रीय सदस्य जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँसम्म छन् । पूर्वसांसद तीर्थ भुसाललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । भुसाललाई चितवनको माडी नगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउन सक्रियता देखाएको आरोप छ । कांग्रेस महासमिति सदस्य खनियाँलाई चितवनको एक नगरपालिकामा अन्तर्घात गरी कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराउन लागेको आरोप छ । कैलालीका महासमिति सदस्य पदमराज भट्ट र लक्ष्मीराज पाठकविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । दैलेख जिल्ला अनुशासन समितिले जिल्ला सभापति र सचिवलाई कारबाही गरिसकेको भन्दै अनुमोदन गर्न केन्द्रमा पठाएको छ ।
-गत संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेस अनुशासन समितिले नेतृ सुजाता कोइरालालाई कारबाही गरेको थियो । तीन महिना निलम्बन गरेको केही समय भुक्तान भए पनि पछि पार्टीले बाँकी समय मिनाहा गरिएको थियो । -नयाँ पत्रिकाबाट